ပြားချပ်ချပ်အတောင့်ကြိတ်စက်အရွယ်အစားသေးငယ်သည်, အစာကျွေးခြင်းနှင့်သစ်သားလုံးလေးများပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ. ၎င်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြစ်သည် လုံးလေးများ နှင့် 200 မီလီမီတာအချင်းသေဆုံးလျက်ရှိသည်, သေတွင်းထဲရှိအပေါက်များသည်သင်လိုချင်သမျှအရွယ်အစားဖြစ်နိုင်သည်. စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်သူတို့ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်, ထိုကဲ့သို့သော sawdust အဖြစ်, ပြောင်းဖူး stover, ကောက်ရိုး, ဆန်ခွံ, စွန်ပလွံအခွံနှင့်အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလုံးလေးများထဲသို့ထည့်သည်. ဆူညံသံ, မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်မြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ဤစက်သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအတောင့်တင်းစက်ဖြစ်သည်။. Flat die Pellet Mill သည်ကုန်ကြမ်းအမျိုးမျိုးမှလုံးလေးများထုတ်လုပ်ရန်ပြားချပ်ချပ်သေပေါ်တွင်မူတည်သည်. မတူညီသောကုန်ကြမ်းများသည်ကွဲပြားမှုသိပ်သည်းမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလုံးလေးများသည် ၄ ​​င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အညီမတူညီသောထုထည်များရှိရန်လိုအပ်သည်. ဥပမာ, တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်များသည်လောင်စာတောင့်များကဲ့သို့မခဲယဉ်းပါ. ထို့ကြောင့်လုံးလေးများနှင့်အမျိုးမျိုးသောကုန်ကြမ်းအမျိုးအစားများကိုလုံးလေးများပြုလုပ်ရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပြားချပ်ချပ်ပုံလိုအပ်သည်. ဖိအားအချိုးမြင့်လေလေ, ထုတ်လုပ်သည့်တောင့်တင်းသည်သိပ်သည်း. သို့သော်ဖိအားအချိုးသည်မြင့်မားလွန်းပါက, ပစ္စည်း die.That ပြောဖို့ပိတ်ဆို့လိမ့်မည်, သင်အရည်အသွေးမြင့်မားလုံးလေးများလုပ်လိုလျှင်, သင်သည်သင်၏ကုန်ကြမ်းအရအကောင်းဆုံးချုံ့မှုနှုန်းနှင့်သင့်လျော်သောပြားချပ်ချပ်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်.
Flat Die Pellet စက်အင်္ဂါရပ်များ
1. လျှပ်စစ်ပြားပြားဖြင့်ပြုလုပ်သောအတောင့်ကြိတ်စက်သည်လျှပ်စစ်မော်တာဖြင့်မောင်းနှင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပိုမိုအကျိုးပြုစေသည်.
2. roller နှင့် flat die များသည်အမာရွတ်သတ္တုစပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းအစိတ်အပိုင်းသည် ၀ တ်ဆင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်ပျက်စီးလွယ်သည်, အပြင်, နှစ်ဖက်စလုံးပြားချပ်ချပ် die ကိုသုံးနိုင်သည်, ထို့ကြောင့်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝရှိခြင်း.
3. တောင့်စက်သည် roller နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကိုအသုံးပြုသည် ,မြင့်မားသောထိရောက်မှု, ယူနီဖောင်းလုံးလေးများအရွယ်အစား.
4. တိကျစွာ - သွန်းသေဆုံးညှပ်အမျိုးအစားလျင်မြန်စွာဖြုတ်အမျိုးအစားသေနှင့် quill အနားကွပ်ချိတ်ဆက်ရန်မွေးစားသည်, သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီသေတ္တာအသစ်နှင့် roller အသစ်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်အဆင်ပြေစွာပြောင်းလဲနိုင်သည်.
5. မြင်နိုင်စွမ်း. pelletizing ပြုလုပ်သောအခါအခန်းထဲသို့ကြည့်ရှုနိုင်သည်, ဒါကြောင့်ပြproblemနာကိုအချိန်မီဖြေရှင်းနိုင်တယ်.
6. အရွယ်အစားသေးငယ်သည် & ကကျယ်ပြန့်အိမ်မှာအသုံးပြုစေသည်သောအလေးချိန်, အသေးစားလယ်ယာ.
7. အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်ကုန်ကြမ်းများ, sawdust လိုပဲ, သစ်သားချစ်ပ်များ, မြေပဲခွံ, ဂျုံကောက်ရိုး, ဝါဂွမ်း, မုယောစပါး, ဌာနခွဲ, ဆန်ခွံ, နေကြာညှာ, ထန်း kernel ကို shell ကိုနှင့်များစွာသောအခြားပစ္စည်းများ.
သစ်သားချစ်ပ်များ, သစ်ပင်များ, ပြောင်းဖူးအညှာ, မြေပဲခွံ, ဆန်ကောက်ရိုး, ဂျုံကောက်ရိုး, ဝါးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း, မင်္ဂလာပါ, မြက်ပင်, ကျောက်စိမ်း, မြက်ပြောင်းပါ, ဆန်ခွံ, ရေနံကိတ်မုန့်, စသည်တို့.